Nzira yekusiyanisa optical access network OLT, ONU, ODN, ONT?
Iyo optical access network ndeyekupinda netiweki inoshandisa mwenje senzvimbo yekufambisa, panzvimbo yematare emhangura, uye inoshandiswa kuwana imba yega yega. Optical kuwana network. Optical access network kazhinji ine zvikamu zvitatu: optical line terminal OLT, optical network unit ONU, optica ...
Zvinoitika kuti iko kushandiswa kweiyo fiber fiber module yakafara kwazvo
Mukuziva kwevanhu vazhinji, chii chinonzi optical module? Vamwe vanhu vakapindura: haina kuumbwa neye optoelectronic chishandiso, pcb board uye neimba, asi chii chimwe chinoita? Muchokwadi, kunyatsojeka, iyo module yemagetsi inoumbwa nezvikamu zvitatu: zvigadzirwa zvemagetsi (TOSA, ROSA, BOSA), ...
Mhando dze fiber amplifiers
Kana daro rekutapurirana rakareba kwazvo (anopfuura makiromita zana), chiratidzo che optical chichava nekurasikirwa kukuru. Munguva yakapfuura, vanhu vaiwanzoshandisa optical repeaters kukwidziridza chiratidzo che optical. Rudzi rwemidziyo iyi ine zvimwe zvaisingakwanise mukushandisa kunoshanda. Yakatsiviwa neo optical fiber gudzazwi ...
Huawei optical module mhando
Iyo yemoduli module chinhu chakakosha mudziyo mune iyo optical fiber kutaurirana system. Huawei optical modules inoburitswa neHuawei Technologies Co, Ltd., uye nzvimbo yekutangira iri Shenzhen. Huawei Technologies Co, Ltd. inopa mupi we telecom network mhinduro. Huawei's main business sc ...
Musiyano uripo pakati peOLT, ONU, router uye switch
Kutanga, iyo OLT ndeye optical line terminal, uye iyo ONU ndeye optical network unit (ONU). Iwo ese ari maviri oparesheni yekutapura network yekubatanidza michina. Iwo ari maviri anodiwa ma module muPON: PON (Passive Optical Network: Passive Optical Network). PON (passive optical network) zvinoreva kuti (...
Pane here musiyano pakati peFTTB neFTTH?
1. Midziyo yakasiyana Kana FTTB yaiswa, zvishandiso zveOUU zvinodiwa; FTTH's ONU michina yakaiswa mubhokisi mune chimwe chikamu chechivakwa, uye mushandisi wakaiswa mushandisi wakabatana mukamuri yemushandisi kuburikidza neChikamu 5 tambo. 2. Yakasiyana yakaiswa chinzvimbo FTTB ndeye fiber optic ...
Ongorora izvo zvina zvikuru zvinodiwa zve data nzvimbo dze optical modules
Parizvino, traffic yeiyo data centre iri kuwedzera zvakanyanya, uye network bandwidth iri kuramba ichivandudza, izvo zvinounza mikana mikuru yekuvandudzwa kweanomhanya-mhanyisa optical modules. Rega nditaure newe nezve izvo zvina zvikuru zvinodiwa zveinotevera-chizvarwa data Center fo ...
LightCounting: Iyo yepasirese oparesheni yekutaurisa indasitiri yekugovera inogona kuganhurwa kuita maviri
Mazuva mashoma apfuura, LightCounting yakaburitsa gwaro rayo razvino pamusoro penzvimbo yeiyo optical indasitiri yekutaurirana. Sangano rinotenda kuti yepasirese opareta yekushambadzira indasitiri yekutengesa inogona kuganhurwa kuita maviri, uye mazhinji ekugadzira achaitwa kunze kweChina uye Kubatana ...
Yazvino Nyika yeindasitiri: Optical Kutakura DWDM Systems Midziyo
"Anokwikwidza kwazvo" ndiyo nzira yakanakisa yekuratidzira musika wemidziyo yeOptical Transport DWDM. Kunyangwe iri musika wakakura, unorema kusvika pamadhora gumi nemashanu emadhora, pane vangangoita makumi maviri evanogadzira masisitimu anoshingairira kutora chikamu mukutengesa michina yeDWDM uye zvine mutsindo kurwira chikamu chemusika. Izvo zvakati, ...
Omdia Kucherekedza: Briteni neAmerican diki opareta maineti vanoshanda vari kusimudzira nyowani FTTP boom.
Nhau dzegumi nematatu (Ace) Chirevo chazvino kubva kukambani yekutsvagisa misika Omida inoratidza kuti dzimwe dzimba dzeBritish neAmerica dziri kubatsirwa neFTTP Broadband services inopihwa nevashandisi vadiki (pane kumisikidza vashandisi vema telecom kana vanoshandisa cable TV). Mazhinji evashandisi vadiki aya ...
CFP / CFP2 / CFP4 Optical Module
CFP MSA ndiyo yekutanga indasitiri standard yekutsigira 40 uye 100Gbe Ethernet optical transceivers. Iyo CFP yakawanda-sosi protocol ndeyekutsanangudza kuiswa kwepakeji yeinopisa-inogona kuchinjika mamodule ekusimudzira 40 uye 100Gbit / s mashandisirwo, kusanganisira anotevera-chizvarwa chepamusoro-mhanya Ethernet application ...
Musiyano uripo pakati peCWDM neDWDM
Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kweiyo Optical yekutaurirana indasitiri, hunyanzvi hwetekinoroji uye mutengo-wekuchengetedza mhinduro unoramba uchiwana. Semuenzaniso, zvigadzirwa zveCWDM neDWDM zviri kuramba zvichishandiswa zvakanyanya, saka nhasi tichadzidza nezveCWDM uye DWDM zvigadzirwa! CWDM inodhura-WDM yekufambisa technolo ...
Sfp C ++, External Modulation Transmitter, Huawei Olt Mutengo, Optical Fiber Module, Xfp Transceiver, Huawei Qsfp +,